Ọhụrụ Samsung Gear S3 ga-eweta na September 1 dị ka a leak | Akụkọ akụrụngwa
Na August 2, Samsung akwadebewo ihe omume nke ọ ga-eweta n'ihu ọha, ọ bụrụ na ọtụtụ asịrị ndị pụtara bụ eziokwu na anyị niile kwenyere na ee, ihe 7 Galaxy Note. Agbanyeghị, ọ dị ka ihe ngosi nke ụlọ ọrụ South Korea agaghị akwụsị ebe ahụ ma ọ bụ na dịka ọtụtụ ntanye na September 1 anyị ga-enwe otu oge atọrọ na Samsung ngwaọrụ ọhụrụ.
Kpọmkwem n'ụbọchị ahụ, ndị Galaxy Tab S3 na Gear S3, dị ka onye nta akụkọ Russia bụ Eldar Murtazin na SamMobile gosipụtara. Banyere nke mbụ, ịtụkwasị ya obi karịrị ihe anabatara, ọ bụ ezie na ọ bụghị n'ogo nke ndị nta akụkọ ndị ọzọ pụrụ iche na nyocha na asịrị. N'ihe banyere SamMobile, anyị nwere ike ikwenye ngosipụta nke ọhụụ Samsung smartwatch maka Septemba 1 na-esote.
N'ezie, ihe niile na-egosi na a ga-ewepụta ngwaọrụ abụọ n'otu oge na oge ahụ ma Galaxy Tab S3 na Gear S3 anyị nwere nkọwa dị ole na ole, ọ bụ ezie na a ga-eche n'echiche na ha ga-emeziwanye nsụgharị nke ndị bu ha ụzọ, na ụfọdụ mgbanwe na imewe nke na-achịkwa ndị ọrụ.
Fewbọchị ole na ole sochirinụ na-arụsi ọrụ ike maka Samsung na ihe niile na-egosi na n'ime otu ọnwa anyị ga-ahụ etu esi kwupụta ọkwa Galaxy Note 7, Galaxy Tab S3 na Gear S3.
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-akwado ụwa nke teknụzụ, zụrụ popcorn iji nwee obi ụtọ na ya ebe ọ bụ na ihe ga-abịa na-atọ ụtọ.
I chere na anyị ga-ahụ ngosi nke Galaxy Tab S1 na Gear S3 na Septemba 3?.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » A ga - ewepụta Samsung Gear S3 ọhụrụ na Septemba 1 dị ka mkpọsa
Enwere ike igosi igwe ojii ọhụrụ n’izuụka ọzọ